Njem Ndagharị Anụmanụ Odisha | Chọpụta Flora na Fauna - 993.702.7574
Njem nke Wildlife Njem Odisha
Njem nke anụ ọhịa Odisha na Sandpebbles - Ahụmahụ mara mma na ọdịdị, Flaura na Fauna nke Odisha.
Na-achọ ezigbo ebe obibi anụ ọhịa? Njem Odighi Anumanu Odisha bụ ebe kachasị mma ị ga-aga!
Ọ bụ ezie na osimiri na ụlọ nsọ na-ewere ụlọ obibi ha maka ewu ewu ha, Wildlife Tours Odisha bụ ihe ịtụnanya ịmara. N'ọtụtụ ogige ntụrụndụ mba, anụ ọhịa, na ebe obibi anụ ọhịa, steeti nwere nnukwu ụdị ugbo na ohia nke na ị gaghị ahụ ebe ọ bụla n'ụwa. Ka ọ bụ Mangrove Forest & Wetland nke Bhitarkanika ma ọ bụ oké ọhịa nke Chandaka, ihe ọ bụla na ụyọkọ nke ala India dị n'ebe ọwụwa anyanwụ na-agụnye anụ ọhịa bara ụba.
Na Odide Wildlife gị Odisha , ị nwere ohere ịhụ ụmụ anụmanụ ka ha na-agagharị na ebe obibi ha na-adịghị ọcha, na-ege ntị n'olu ha ma na-enwe obi ụtọ na-ebili na obi ụtọ. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ narị ụdị dịgasị iche iche nke ihe ndị e kere eke na-agụnye agụ, elephant, crocodile, agbada, jackal, na ọtụtụ ndị ọzọ na ebe obibi ha.
A na-ahazi ngwongwo Odisha anyị na anụ ọhịa maka ọdịmma gị ma nye ohere iji hụ anụ ọhịa kachasị mma nke steeti ga-enye.
DAY 01: Na-abịa Bhubaneswar
Bịa na Bhubaneswar Airport / Ụgbọ okporo ígwè na-agafe na họtel. N'ehihie ụtụtụ gaa n'ụlọ nsọ Lingaraj, Khandagiri Udayagiri Jain Caves. Nri abalị na Ekamra Haat Dinner na nke ehihie na Bhubaneswar.
Mgbe nri ụtụtụ gara Satkosia site na Angul. Were ụgbọ mmiri na Satkosia Gorge ebe ị ga-ahụ ọtụtụ Mugger na Gharial n'akụkụ ájá ájá. Na-agagharị n'ehihie n'ehihie. Nri abalị na uhuruchi na Satkosia.
Mgbe nri ụtụtụ gara Bhitarkanika. Lelee n'ime ebe anyị na - eme njem .Ngbe a na - eri nri ehihie na - adọrọ mmasị n'ugwu Kalibhanja Diha na ụgbọ mmiri dị n'ime obodo nke Wildlife Department kwadoro, iji nwee mmasị na saịtị nke Ramsar. Nri abalị gaa n'ụlọ nsọ Jagannath ịbanye na Live Aalati Darshan. Na mgbede na-anụ ọkụ ọkụ na Snacks na Dinner. N'abalị na Egwuregwu Ngwurugwu Egwu Sand Pebbles.
Mgbe a na-eri nri ụtụtụ dị ụtọ, gaa na nsọtụ Bird, na-agagharị n'ụlọ elu ichu nta nke Eze oge ochie, na-agafe na mmiri dị iche iche nke ụgbọ mmiri nke ụgbọ mmiri kwadoro site na Ngalaba Na-ahụ Maka Anụmanụ, iji hụ crocodiles. Mgbe nri ehihie gaa na ihe ngosi nka na ebe oru ngo. Na mgbede na-enwe obi ụtọ n'ọkụ ụlọ ọkụ na nri nri na nri abalị. N'abalị na Akwa Ugwu Pebbles Sand Pebbles.
Mgbe a na-eri nri ụtụtụ nke na-atọ ụtọ na nleta Similipal Tiger Reserve. Nbanye na nkwari akụ. Mgbe nri ehihie na-aga ije na ọmụmụ ihe gbasara anụ ụlọ, gaa na ugbo na-azụlite Crocodile. Nri abalị na abalị na Similipal.
Mgbe nri ụtụtụ gara Barehipani na Joranda Waterfalls na Jungle Safari. Gaa na mpaghara mmebi. Nri abalị na abalị na Similipal.
DAY 07: Similipal - Mbula
Mgbe nri ụtụtụ gachara njem